Nei uchishandisa PVC kupisa inodzikamisa?
PVC mune tembiricha yakawedzerwa kune angangoita 140 degrees, chii chisingazowedzere nyaya yekuora, asi panguva ino PVC haigone kuiswa mupurasitiki, haigadziriswe, saka kuti ibudise zvigadzirwa zvePVC, inofanira kuwedzera tembiricha yakakwira, Ipapo iwe unofanirwa kujoina iyo stabilizer kuitira kuti PVC irege kuora, kuti upe PVC kugadzirisa kuita.
Chii chinonzi PVC calcium uye zinc inogadzikana?
Zvigadzirwa zvePVC zvinoshandiswa mukugadzirwa kweanogadzikana anoshandiswa anonyanya kushandiswa mutobvu munyu nesimbi sipo komponi inogadzikana, nekuda kwekushandisa kwayo yakawanda mutobvu munyu, zvichikonzera kusvibiswa kwezvakatipoteredza, tembiricha yakakwira yeplastizing, isina mhinduro mhinduro kuyerera, kesi yesarufa kuparara nedzimwe nyaya. Kunyanya nevanhu vezvigadzirwa zvepurasitiki, zvinodiwa zvezvakatipoteredza zviri kuwedzera nekukwirisa, kuvandudzwa kweasina-chepfu calcium uye zinc yakasanganiswa inogadzikana zvakanyanya kutarisisa kwevanhu. Isina-chepfu calcium uye zinc yakakomberedzwa inogadzikana ndeye calcium uye zinc organic salts, phosphites, polyols, antioxidants uye solvents uye zvimwe zvikamu zveyakaomarara. Calcium uye zinc inogadzikana uye resin uye plasticizer inoenderana, kujekesa kwakanaka, hazvisi nyore kudzikisira, huwandu hwediki, nyore kushandisa.
Chii chinonzi kugadziridza sevhisi?
Sekureva kwemutengi kubva kumuenzaniso wakapihwa, zvinodikanwa zvinodiwa, kuongorora uye kuyedza sampuro, kutsvagisa nekusimudzira kweinodhura calcium uye zinc inogadzikana kusangana nezvinodiwa mumusika, chero nguva yekupa rutsigiro rwehunyanzvi uye mhinduro.
Sampuli dzinogona kupihwa mahara?
Welcome wobvunzurudza, unogona kuva wakasununguka kupa 1kg ivhu kukambani yako.
PVC Kupisa Kunodzikamisa Flexbile, Pvc Imwe Pack Inodzikamisa, Pvc Heat Inodzikamisa, PVC yokuvirisa, PVC Isina-Inotyisa Stabilizer, PVC Stabilizer,